Iingcamango ezi-20 eziPhambili zoMthi eziBantwana - Ukuhonjiswa Kwehlobo Kunye Nesitayile
Iingcamango ezi-20 eziPhambili zoMthi eziBantwana
Ye umntwana , ayikho enye into umlingo Ngaphandle kweindlu yomthi. Akukho nto yoyikisayo njengomzali, nangona kunjalo, kunethemba lokwakha. EziUyilo lwendlu yeengcinga kunye nokukhethwa kwangaphambiliUluhlu oluvela ngokulula kakhulu ukuya kupholile ngokuqatha kwaye luyinkimbinkimbi, kuxhomekeke kwindlela onokuthi usebenze ngayo isando (kunye nezixhobo ezimbalwa kunye nokubonelela). Kodwa ungakhathazeki-zininzi iingcinga zoyilo lwendlu ukukhuthaza umntwana ongaphakathi. Kwaye, zintle ngokwaneleyo ukuba ziqhubeke kwi ngasemva kudala emva kokuba abantwana bebaphumile (enye yeembono zethu zomthi, umzekelo, yindawo yokubaleka ephuphayo, ephuphayo).
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1 Yongeza i-Swing UCharles Mayer Ukufota
Le ndlu yomthi ukusuka Uyilo lweHollander ijongeka intle ngokwaneleyo ukuba ingaphila ngokusisigxina. Kuza kugqityiwe ngesilayidi esigobileyo kunye nokujika okulula.
Mbini Yongeza nje iiCushion UFrank omangalisayo
Gcina izinto ezincinci kwaye zilula. Le ndlu intle yomthi ifaka ipopu entle yepeyinti eluhlaza eluhlaza kwaye itshintshelwa kwigumbi leklabhu enee-cushion ezimbalwa ezinemigca.
3 I-Cabin yeLog Fihla ngaphandle UJames Merrell
Akudingeki ukuba ibe kwizikhonkwane ukuze ibe yindlu yomthi. Kule propati yaseNew York, umyili U-Anthony Baratta yamkela imeko yeenkampu zasehlotyeni kwaye yenza indawo yokufihla indlu encinci phakathi kwemithi.
4 Yongeza i-Rope Swing Ukuveliswa kweNja etyheliImifanekiso kaGetty
Yigcine iklasikhi (kunye ne-scrappy) ngentambo ejikelezayo! Unokongeza imivalo yenkawu ukuba uziva unamabhongo.
5 Umntu omdala-Unobuhlobo Indlu entle
Le oasis encinci igxunyekwe emithini kwaye yenzelwe nguJill Morris igqibelele kwigumbi leendwendwe eliphuphayo okanye kwigumbi lokulala kunye nendawo yokufihla abantwana emini.
6 Isongelwe kwiveranda Indlu entle
Umbono wangaphandle wale ndlu ineendlu enye ephuphayo eyenzelwe nguJill Morris ibonisa ukuba iveranda ejikelezayo ayisiyondlu iphambili kuphela.
umhombiso omhlophe wodonga kwigumbi lokulala
7 Yenze ibe yiGazebo ApatsaraImifanekiso kaGetty
Yenze ibe yi-gazebo ephezulu endaweni yendlu yomthi. Ngale ndlela iyakuhlala iphakamile kwaye ikhule xa abantwana bengasafuni ukudlala kuyo.
8 Yinike iFairytale Flair KolupaevImifanekiso kaGetty
Le ndlu yomthi ijongeka ngathi yinto ethe nca ngaphandle kukaHansel kunye noGretel, ke iqinisekile ukuba izakusa umbono (nangona ngethemba uMzalwana uGrimm-esque omncinci).
9 Yizise ngaphakathi Isitudiyo soBomi / isitayile
Kanye xa ucinga ukuba akukho nto iya kubavuyisa ngexesha lokulala, le nto yeza. Igumbi lomntwana ophuphayo eliyilwe ngu Isitudiyo soBomi / isitayile Ingqina ukuba awuyidingi eyadini yangasemva ukuze ube nendlu ye-epic. Ivenkile le Ibhedi yomthi evela ePottery Barn Abantwana wento efanayo.
10 Izibane eziLinganisiweyo UDAVIDE HILLEGAS
Ukuxhoma izibane zomtya emithini kuya kuyenza izive ngakumbi nangakumbi nangomlingo kubantwana kwaye abantu abadala.
I-molly amantombazana aseMelika axabisa
Shumi elinanye Dibanisa ezimbini Indlu entle
Ekuphela kwento engcono kunokuba nendlu yomthi ngasemva kwendlu yakho ineendawo ezimbini zemithi kwiyadi yakho edityaniswe yibhulorho yokumisa.
12 Khuphela uyilo lweNqaba USara Tramp
Lo mthi usemva kwendlu eyilwe ngu UEmily Henderson ithatha izinto phezulu inotshi. Endaweni yokuhamba nendlu yomthi yeklasikhi, yenze ibonakale ngathi yinqaba.
13 Yibeke kwindawo ethile unombono UMaremagnumImifanekiso kaGetty
Ukubekwa kuyo yonke into. Indlu yomthi yafumana indawo yokuqala yokuthengisa izindlu nomhlaba ejonge isidiliya (isitulo esime kufutshane senzelwe abantu abadala ukuze bakwazi ukungena kumbono omnandi, nabo).
14 Ipuli esondelelene nayo Indlela yokuphila ye Studio
Olu lwakhiwo lokudlala eyadini ngasemva Isitudiyo soBomi / isitayile ayisiyiyo indlu yomthi ngenkcazo, kodwa iyonwabisa nje, enkosi kwichibi elikufutshane kunye nomjelo wamanzi. Ngapha koko, ikwizikhonkwane, ke ineziphumo ezifanayo eziphakamileyo onokuzifumana kwindlu yesiqhelo yeklasi.
Shumi elinantlanu Yibeke kwiiStilts Uyilo oluqhelekileyo
Ngaba awufuni ukwakha indlu yomthi kwimithi eyiyo? Yilinganise ukujonga ngendlwana eyakhiwe ngamaplanga. Le yenzelwe ngu Uluntu yeyona ndawo ilungileyo yokubalekela kuyo. Izinto zangaphakathi zibonisa indawo yokulala eyakhelwe-ngaphakathi, ii-moshi ezininzi, kunye neefestile zeglasi ezinombala.
16 Ukulungiselela kwangaphambili i-Sandbox Treehouse Indlela
Baza kuziva ngathi benyuka emithini — ngaphandle kokukhathazeka ngokuwa kwabo ngaphandle yomthi-ukuba ukhetha isakhiwo sokudlala sangaphambili Le .
17 Indlu elula yomthi elula Ngokunyanisekileyo kokuBamba uvuyo
Ayisiyonto intle, kodwa iya kuwenza umsebenzi wenziwe ngaphandle kokophula yonke into emzimbeni wakho xa usakha.
iinkwenkwezi zokudubula ngo-Agasti 2019
Fumana isifundo kwi Ukuthimba uvuyo .
18 Indlu yomthi eneZip Line Ngobubele bukaBarbara Butler
Abantwana bakho banokuziva ngathi uTarzan ujinga emithini!
Funda ngakumbi kwi UBarbara Butler .
19 IziCwangciso zoKwakha eziKhokelwayo Etsy
Khetha kuthotho lwezikhokelo kunye nezicwangciso zokwenza ukuba inkqubo yokwakha ibelula. Apha ezinye iindlela ezintle.
Amashumi amabini Indlu yoMthi wokwahlula-hlula Ngobubele beMama oMnandi
Le ndlu yomthi enemigangatho emibini iphindwe kabini kumnandi. Nokuba ndimdala, ndaye ndafuna ukunyuka olo donga lwamatye.
Fumana isifundo kwi Yiba ngumama omnandi .
Uhlala phi uTony stark
amathambo alungileyo mna sana
igumbi lokuhlambela isiqingatha sodonga
imibala yegumbi kubafana